Inona no atao hoe batemy | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ny batisa amin'ny rano - mariky ny fibebahan'ny mpino, famantarana fa manaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpanavotra izy - dia fandraisana anjara amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Ny fanaovana batisa "amin'ny Fanahy Masina sy ny afo" dia manondro ny asa fanavaozana sy fanadiovana ny Fanahy Masina. Ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany dia manao batemy amin'ny alàlan'ny fandrobohana (Matio 28,19:2,38; Asa. 6,4:5; Romana 3,16: 1-12,13; Lioka 1:1,3; 9 Korintiana 3,16; Petera; Matio).
Ny hariva talohan'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, dia naka mofo sy divay i Jesosy ary nilaza hoe: "... ity no tenako ... ity no rako amin'ny fanekena ..." Isaky ny mankalaza ny Sakafon'ny Tompo isika dia mandray mofo sy divay ho fahatsiarovana. Mpamonjy antsika ary ambarao ny fahafatesany mandra-pihaviny. Ny sakramenta dia fandraisana anjara amin'ny fahafatesana sy fitsanganan'ny Tompontsika, izay nanolotra ny vatany ary nandatsaka ny rany mba ho voavela heloka isika (1 Korintiana 11,23: 26-10,16; 26,26:28; Matio.
Didy ny fiangonana
Ny Batemy sy ny Fanasan'ny Tompo no baiko ara-piangonana roa an'ny Kristianisma Protestanta. Ireo ôrdônansy ireo dia famantarana na mariky ny fahasoavan'Andriamanitra miasa amin'ny mpino. Miharihary izy ireo manambara ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fanondroana ny asa fanavotan'i Jesosy Kristy.
«Ny baiko ara-pivavahana, ny Fanasan'ny Tompo sy ny batisa masina ... dia miara-mitsangana, mihemotra sy soroka ary manambara ny tena maha-fahasoavan'Andriamanitra izay eken'ny tsy fankatoavan-tsika ary amin'ny alalàn'ny fanekem-pinoana tsy anekena antsika inona ny nataon'i Kristy ho antsika » (Jinkins, 2001, p. 241).
Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny batisan'ny Tompo sy ny fanasan'ny Tompo dia tsy hevitr'olombelona. Taratry ny fahasoavan-drainy izy ireo ary nampiasain'i Kristy. Hitan'Andriamanitra ao amin'ny Soratra Masina fa mibebaka ny lehilahy sy ny vehivavy (mitodiha any amin'Andriamanitra - jereo ny lesona faha-6) ary atao batisa ho famelan-keloka (Asan’ny Apostoly 2,38), ary ny mpino dia tokony "hihinana mofo sy divay ho fahatsiarovana an'i Jesosy" (1 Korintiana 11,23: 26).
Ny baiko ara-piangonana vaovao ao amin'ny Testamenta Vaovao dia tsy mitovy amin'ny fombafomba taloha ao amin'ny Testamenta Taloha satria "aloky ny entana ho avy" ihany ity farany ary "tsy azo atao ny manaisotra ireo ota amin'ny alàlan'ny ran'ny omby sy osy". (Hebreo 10,1.4). Ireo fombafomba ireo dia natao hanavahana ny Isiraely hiala amin'izao tontolo izao sy hampisaraka azy ho fananan'Andriamanitra, raha ny Testamenta Vaovao kosa dia mampiseho fa ny mpino rehetra amin'ny firenena rehetra dia ao amin'i Kristy.
Ny fombafomba sy fanatitra dia tsy nitondra ho amin'ny fahamasinana sy ny fahamasinana maharitra. Ny fanekena voalohany, ny fanekena taloha izay niasan'izy ireo, dia tsy manan-kery intsony. Zanaka naka ny voalohany izy mba hahafahany mampiasa ny faharoa. Araka izany dia hohamasinina indray mandeha isika rehetra amin'ny soron'ny tenan'i Jesosy Kristy » (Hebreo 10,5: 10).
Marika izay taratry ny fanomezana avy amin'Andriamanitra
Ao amin'ny Filipiana 2,6: 8 dia mamaky isika fa nahafoy ny tombontsoany masina ho antsika i Jesosy. Andriamanitra Izy nefa tonga olombelona hamonjy antsika. Ny batisan'ny Tompo sy ny Fanasan'ny Tompo dia mampiseho izay nataon'Andriamanitra ho antsika fa tsy izay nataontsika ho an'Andriamanitra. Ho an'ny mino, ny Batemy dia fanehoana ivelany ny adidy anaty sy ny fanoloran-tena, saingy voalohany sy lehibe indrindra ny fandraisana anjara amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanolorany tena ho an'ny zanak'olombelona: atao Batemy amin'ny fahafatesan'i Jesosy isika, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiakarany.
«Ny batisa dia tsy zavatra ataontsika, fa izay natao ho antsika» (Dawn & Peterson 2000, p. 191). Nanazava i Paoly hoe: "Sa tsy fantatrareo fa ny olona rehetra natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany?" (Romana 6,3).
Ny ranon'ny batisa izay mandrakotra ny mpino dia maneho ny fandevenana an'i Kristy ho azy. Ny fiakarana avy amin'ny rano dia maneho ny fitsanganan'i Jesosy sy ny fiakarany: «... amin'ny fomba nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray no handehanantsika eo amin'ny fiainana vaovao» (Romana 6,4b).
Noho ny fanehoana an'ohatra fa voaharona tanteraka ny rano isika ary maneho izany fa "alevina miaraka amin'izany isika amin'ny alalan'ny batisa ho amin'ny fahafatesana" (Romana 6,4a), ny Eglizy manerantany dia manao ny batisan'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fandroboka tanteraka. Mandritra izany fotoana izany dia eken'ny Fiangonana ny fomba fanaovana batisa hafa.
Ny tandindon'ny batemy dia mampiseho antsika "fa ny toetsika taloha dia niara-nohomboana taminy mba handravana ny vatan'ny ota mba tsy hanompoantsika intsony ny ota" (Romana 6,6). Ny batisa dia mampahatsiahy antsika fa tahaka ny nahafatesan'i Kristy sy ny nitsanganany tamin'ny maty, dia maty ara-panahy miaraka aminy koa isika ary atsangana miaraka aminy (Romana 6,8). Ny Batemy dia fampisehoana miharihary ny fanomezan'Andriamanitra ny tenany ho antsika ary maneho ny tenany fa "Kristy maty ho antsika, fony mbola mpanota isika" (Romana 5,8).
Ny Sakafo fanasan'ny Tompo koa dia manaporofo ny fitiavana feno fahafoizan-tena, ny asa famonjena avo indrindra. Ny sary ampiasaina dia maneho ny vatana tapaka (Mofo) sy ny ra nandriaka (Divay) mba ho voavonjy ny olombelona.
Raha nanorina ny Sakafo Harivan'ny Tompo i Kristy dia nizara ny mofo tamin'ny mpianany ary niteny izy: "Raiso, hano, ity no tenako izay homena ho anareo" (1 Korintiana 11,24). Jesosy no mofon'aina, "ny mofo velona izay avy any an-danitra" (Jaona 6,48-58).
I Jesosy koa dia nanolotra ilay vovony ary niteny hoe: "Misotroa azy rehetra ity, ity no rako amin'ny fanekena, izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka" (Matio 26,26: 28). Io ilay "ra ny fanekena mandrakizay" (Hebreo 13,20). Noho izany, ny tsy firaharahiana na ny tsy firaharahana na ny fandavana ny lanjan'ny ranon'ity fanekena vaovao ity dia manararaotra ny fanahin'ny fahasoavana (Hebreo 10,29).
Tahaka ny batisan'ny batisa dia maka tahaka sy fandraisana anjara matetika amin'ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganan'i Kristy, dia toy izany koa ny Fanasan'ny Tompo dia famerenana miverimberina sy fandraisana anjara amin'ny vatana sy ny ran'i Kristy izay natokana ho antsika.
Mipetraka ny fanontaniana momba ny pasipaoro. Ny Paska dia tsy mitovy amin'ny fanasan'ny Tompo satria hafa ny tandindona ary satria tsy maneho ny famelan-keloka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Ny Paska dia mazava tsara koa ny hetsika isan-taona, raha ny fanasan'ny Tompo kosa dia azo raisina isaky ny mihinana an'io mofo io sy misotro amin'ny kapoaka " (1 Korintiana 11,26).
Ny ran'ny zanak'ondrin'ny Paska dia tsy nariana hamela heloka satria ny biby biby tsy afaka manaisotra ny ota intsony (Hebreo 10,11). Ny fomba fanao amin'ny sakafo Paska, alina mifoha izay atao amin'ny fivavahan'ny Jodaisma, dia tandindona ny fanafahana nasionaly an'i Israely avy tany Ejipta (Eksodosy 2; Deot 12,42); tsy midika hoe famelan-keloka akory izy io.
Ny helok'ireo Isiraelita dia tsy voavela tamin'ny alàlan'ny fankalazana ny Paska. Novonoina i Jesosy ny andro izay namonoana ny zanak'ondrin'ny Paska (Jaona 19,14), izay nanosika an’i Paoly hilaza hoe: "Isika koa manana zanak’ondrin’ny Paska, dia i Kristy izay natao sorona» (1 Korintiana 5,7).
Fiaraha-monina sy ny fiarahamonina
Ny batisan'ny Tompo sy ny fanasan'ny Tompo koa dia maneho taratra ny firaisana sy ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Amin'ny alàlan'ny "Tompo iray, ny finoana iray, ny batisa iray" (Efesiana 4,5) ny mpino dia "nifandray taminy ary tonga tahaka azy tamin'ny fahafatesany" (Romana 6,5). Rehefa atao batisa ny mpino dia mino ny Fiangonana fa nandray ny Fanahy Masina izy.
Amin'ny alàlan'ny fandraisana ny Fanahy Masina dia atao batisa anaty vondrom-piangonana ny kristiana. "Satria isika rehetra dia natao batisa iray ihany amin'ny vatana iray, isika jiosy na Grika, andevo na tsy andevo, ary samy manana fanahy iray isika rehetra" (1 Korintiana 12,13).
I Jesoa dia lasa firaisan'ny Fiangonana, dia ny tenany (Romana 12,5: 1; 12,27 Korintiana 4,1:2; Efesianina) tsy mamela na mandiso na oviana na oviana (Heb. 13,5: 28,20; Matio). Ity fandraisana anjara mavitrika amin'ny fiarahamonina kristiana ity dia manamafy amin'ny fandraisana mofo sy divay eo amin'ny latabatry ny Tompo. Ny divay, ilay kapoaky ny fitahiana, dia tsy ny "fiombonan'ny ran'i Kristy" sy ny mofo, "ny firaisana amin'ny tenan'i Kristy", fa izy ireo koa dia mandray anjara amin'ny fiainana iraisan'ny mpino rehetra. "Ary isika maro dia vatana iray ihany, satria mizara mofo iray daholo isika rehetra" (1 Korintiana 10,16: 17).
Ny Fanasan'ny Tompo sy ny batemy dia fandraisana anjara hita maso amin'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Rehefa nandidy ny mpanaraka azy i Jesosy fa na aiza na aiza alehany dia tokony hanao Batemy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina izy ireo (Matio 28,19:2,38), torolàlana io mba hanao batisa ny mpino ao amin'ny fiarahamonin'ireo mahazo famelan-keloka. Ny Asa dia manazava fa ny batisa dia "famelana heloka" ary noho ny fandraisana ny fanomezana ny Fanahy Masina.
Rehefa "atsangana miaraka amin'i Kristy isika" (izany hoe, hitsangana avy amin'ny rano batisa ho fiainana vaovao ao amin'i Kristy), tokony hifamela heloka isika, toy ny namelan'ny Tompo ny helokay (Kolosiana 3,1.13; Efesiana 4,32). Ny batisa dia midika fa manome famelan-keloka isika ary mahazo famelan-keloka.
Ny Sakafo fanasan'ny Tompo indraindray dia antsoina hoe "kominio". (Ny hevitra dia hamafisina hoe manana firaisana amin'i Kristy sy ny mpino hafa isika amin'ny alàlan'ny marika). Anisany koa ny hoe "Eokaristia" (Avy amin'ny teny grika "fisaorana" satria Kristy dia nisaotra talohan'ny nanolorany ny mofo sy ny divay).
Rehefa miangona isika haka ny divay sy ny mofo, dia manambara amim-pankasitrahana ny fahafatesan'ny Tompontsika noho ny famelan-kelokay mandra-piverin'i Jesosy (1 Korintiana 11,26) ary mandray anjara amin'ny fiombonan'ny olo-masina sy amin'Andriamanitra isika. Mampahatsiahy antsika izany fa ny famelan-keloka dia midika fa mandray anjara amin'ny dikan'ny soron'i Kristy isika.
Tandindomin-doza isika raha mitsara olon-kafa tsy mendrika ny famelan-kelok'i Kristy na ny famelan-kelokay manokana. Hoy i Kristy: "Aza mitsara mba tsy hotsaraina ianareo". (Matio 7,1). Izany ve no tian'i Paoly resahina ao amin'ny 1 Korintiana 11,27: 29? Ary raha tsy mamela heloka isika dia tsy manavaka na mahatakatra fa ny vatan'ny Tompo dia ho vaky ny famelana ny olona rehetra? Ka raha tonga eo amin'ny alitara fanaovana sakramenta isika ary manana mangidy ary tsy mamela heloka, dia mihinana sy misotro ny singa amin'ny fomba tsy mendrika isika. Ny fiankohofana marina dia mifamatotra amin'ny famelan-keloka (jereo ihany koa ny Matio 5,23: 24–XNUMX).
Enga anie ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ho eo amin'ny fomba fandraisana ny fanasan'ny Tompo.
Ny batisan'ny Tompo sy ny sakramentan'ny Tompo dia fihetsika ara-pivavahana amin'ny fotoam-pivavahana manokana sy ny fiarahamonina izay maneho ny filazantsaran'ny fahasoavana. Mifandraika amin'ny mpino izy ireo satria notendren'i Kristy ho an'ny Soratra Masina ny nanokanany azy, ary izy ireo dia fitaovana fandraisana anjara mavitrika amin'ny fahafatesana sy fitsanganan'ny Tompontsika.